Gael Clichy oo Andy Carrol ku tilmaamay ciyaaryahan kubad la garab mari karin.
6/18/2012 6:22:00 P
| Comments() Warsaw--KNN--Difaaca bidix ee kooxda Manchester City iyo xulka qaranka Les Blueska ayaa sheegay in Andy Carrol uusan isaga marka ay ka horyimaadaan kubad wanaagsan la imaan. Clichy ayaa isaga oo ka hadlayey goolkii uu dhaliyey Andy Carrol kulankii ay la ciyaareen Sweden waxaana uu Clichy sheegay in xagiisa uu weeraryahan ugaraneyn Carroll.
26 jirkaan France Cael Clichy ayaa isagoo dhoola cadeynaya yiri “Waxaan aaminsanahay in Carrol iyo Weeraryahano la mid ah kubad ila dhaafi karin anigoo difaac ciyaaraya xilli uu wareysi siinayey wargeys poland kasoo baxo ayuu hadalkaasi maanta sheegay.
Clichy ayaa sheegay hadii la weydiin lahaa weeraryahanka ugu fiican yaad ucodeyn lahayd ayuu ku jawaabay Weyne Rooney oo uciyaara Seddexda libaax ee Ingiriiska.
Hayeeshee Waxa uu Clichy sheegay in uu yahay laacib andy carroll walaw uusan isaga kubad la ag mareen.